समाचार | गृहपृष्ठ - Part 4
मुलुककै ठूलो र अत्याधुनिक सभाहल लुम्बिनीमा
समाचार 595 views
वैशाख ६, लुम्बिनी । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र अत्याधुनिक सभाहल बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा बन्ने भएको छ । यही वैशाख १६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास गर्ने तयारी लुम्बिनी विकास को... बिस्तृतमा
सिण्डिकेटविरुद्ध उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सरकारी निर्णयको स्वागत
मुख्य खबर, समाचार 283 views
वैशाख ६, काठमाडौं (अस) । सरकारले सिण्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायी विरुद्ध कडा नीति लिएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले त्यसको स्वागत गरेको छ । यातायात व्यवसायी सम्बद्ध सङ्घ संस्थाको दर्ता... बिस्तृतमा
राष्ट्र बैङ्कले खरीद गर्दैछ ५ अर्बको ट्रेजरी बिल, ३ बजेसम्म बोलकबोल
मुख्य खबर, समाचार 85 views
वैशाख ६, काठमाडौं (अस) । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीवार रू. ५ अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल खरीद गर्दैछ । ट्रेजरी बिल खरीदका लागि राष्ट्र बैङ्कले बिहीवार ३ बजेसम्म अनलाइन बिडिङ खुला गरेको जानकारी... बिस्तृतमा
शत्रुहरु फेरी अस्थिरता पैदा गर्ने दाउमा छन्ः गृहमन्त्री
समाचार 74 views
वैशाख ६, चितवन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशलाई हिजोकै अस्थिरतातर्फ फर्काउने दाउमा देश भित्र र बाहिरका शत्रुहरु लागिपरेको भन्दै सुरक्षालाई मजबुत बनाउन निर्देशन दिएका छन् । बिहीवार जिल्ला... बिस्तृतमा
चौथो भक्तपुर औद्योगिक मेलामा ८ करोडको कारोबार
वैशाख ६ भक्तपुर । नयाँ वर्षको अवसरमा आयोजित चौथो भक्तपुर औद्योगिक, साँस्कृतिक, पर्यटन तथा व्यापार मेलामा रू. आठ करोडको व्यापार भएको छ । २०० भन्दा बढी दैनिक उपभोग्य सामग्रीको स्टल राखिएको मेल... बिस्तृतमा
८ महीनाको वैदेशिक व्यापार अवस्था : निर्यात व्यापार निराशाजनक
समाचार 50 views
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि निर्यातको अवस्था भने अझै निराशाजनक नै देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको ८ महीनाको तथ्याङ्कले मुलुकको निर्... बिस्तृतमा
सङ्क्रमण व्यवस्थापनमा वार्षिक ९० अर्ब
काठमाडौं । विश्व बैङ्कले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आगामी ४ वर्षसम्म वार्षिक रू. ७५ अर्बदेखि १ खर्ब थप दायित्व थपिने बताएको छ । बुधवार काठमाडौंमा नेपालको पछि... बिस्तृतमा
ऊर्जासम्बन्धी नेपाल–भारत बैठक : ७ विषयमा सहमति
मुख्य खबर, समाचार 112 views
काठमाडौं । गत सोमवार र मङ्गलवार भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको दुई देशका ऊर्जासम्बद्ध उच्च अधिकारीहरूको बैठक सकारात्मक दिशानिर्देश गर्दै सम्पन्न भएको छ । दुई देशको विद्युत् व्यापार विषयको सेरोफेर... बिस्तृतमा
स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनका लागि नयाँ कानून बनाइँदै
काठमाडौं । अस्वाभाविक तथा अनपेक्षित रूपमा विदेशबाट आयात हुने सामान रोक्ने एवम् स्वदेशमै उत्पादित वस्तु प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले नयाँ कानून ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ । सो उद्... बिस्तृतमा
नेपाल र चीनबीच भएका सबै सम्झौता तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत
समाचार 59 views
वैशाख ५, काठमाडौं । नेपाल र चीनले साझा समृद्धि र सम्पर्क विस्तारका निम्ति सीमापार बहुआयामिक यातायात सम्पर्क सञ्जाल विकास हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल र चीनबीच बुधवार बेइजिङ्गमा भएको परर... बिस्तृतमा